Banyere Anyị - Xuzhou Huayan Gas Equipment Co., Ltd.
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Xuzhou Huayan Gas Equipment Co., Ltd., Bụ a na-eduga gas compressors eweta, The ụlọ ọrụ na-headquartered na Xuzhou City, Jiangsu Province, China.Covers mpaghara nke 91,260㎡, Ebe ọ bụ na mmepụta nke gas compressors na 1965,
Anyị ụlọ ọrụ chịkọbara ọgaranya imewe na n'ichepụta ahụmahụ, nwere ọkachamara forging, nkedo, okpomọkụ ọgwụgwọ, ịgbado ọkụ, machining, mgbakọ ule na ndị ọzọ mmepụta na nhazi ike, na zuru oru ule ngwá na ụzọ, Anyị nwere ike chepụta, rụpụta na wụnye ngwaahịa dị ka si paramita nke ndị ahịa.
A na-emepụta mmepụta kwa afọ nke 500 tent nke gas compressors dị iche iche. Ugbu a, nrụgide nrụgide compressor nke ụlọ ọrụ na-emepụta nwere ike iru ruo 50MPa, ngwaahịa anyị na-ekpuchi ubi nke nchebe mba, ikuku, ike nuklia, petrochemical na ubi ndị ọzọ.
A na-ebupụ ngwaahịa anyị n'ọtụtụ mba gburugburu ụwa, tumadi: Indonesia, Egypt, Vietnam, South Korea, Thailand, Finland, Australia, Czech Republic, Ukraine, Russia na mba ndị ọzọ, anyị nwere ike ịnye ngwọta zuru ezu maka onye ọ bụla. ndị ahịa gburugburu ụwa, ụlọ ọrụ anyị na-ekwe nkwa na ndị ahịa ọ bụla na-ekwe nkwa na ngwaahịa dị elu na àgwà ọrụ magburu onwe ya.
Ihe kariri ngwaahịa compressor gas iri na ikike ọhụrụ bara uru.
A na-ebupụ ngwaahịa na ihe karịrị mba 20, Mere na China, Achọrọ International
Ụlọ ọrụ anyị dị na Xuzhou, China, na-ekpuchi mpaghara 91,260 ㎡ na ebe ụlọ nke 55,497 ㎡.
Ihe karịrị afọ 50 nke ahụmịhe nrụpụta gas compressor
Ndị otu ọkachamara, na-aga n'ihu na-emewanyewanye, na-arụpụta ngwaahịa na ọrụ compressor gas dị elu, ma gbalịsie ike inweta afọ ojuju ndị ahịa 100%.